Castle for Sale, Castle of Alamo, atsinanan'i San Francisco Finday manokana
Castle for Sale, Castle of Alamo
Home » Listings » Castle for Sale, Castle of Alamo
Nanonofy tranobe iray misy fiainana manokana sy fijery izy ireo - fomba fijery mifanaraka amin'ny fanjakana. Tsy ho toy ny olon-kafa ny lapa. Ny toerana tokony ho latsaky ny adiny iray avy any San Francisco. Fantatr'izy ireo ny toe-javatra tonga lafatra tamin'ny fotoana nahitany izany. Nalaina tao amin'ny lohasahan'i Diablo Tendrombohitra Alamo, CA, ity tranonkala 2.22-acre ity dia manome ny fomba fijery 360 ambony, anisan'izany ny vistas of the Las Trampas ridgeline.
Vantany vao voaro ny tany dia nofenoina ny nofy. Nanjavona ny fisainana. Nanomboka nitady sy nanangona fitaovam-panorenana izy ireo - zavatra izay mety hohavaozina mba hamoronana ity trano tsy mahazatra ity - mihoatra ny 130,000 nampiasa biriky hita tao amin'ny trano fandefan'i Oakland nolavahana, paompy fantson-drano, rindrina ary kofehy nolavina tamin'ny magazay JCPenney taloha tao afovoan-tananan'i San Francisco, Lahatsoratra maivana izay nandrehitra indray ny vakim-paritra Merritt ao amin'ny 1910s, mpandihy iray nivoaka avy tao amin'ny gymnasium Fremont High School, nisy fiandrandrana teo am-baravarankelin'ny kianjan'i Jack London ao Oakland, ary ny toeram-pivarotana vita avy amin'ny ala nalain'ny Lohasahan'i Napa.
Mikasika ny tsipiriany rehetra, dia naharitra telo taona ny fitondrana ny Alamo Castle. Amin'izao fotoana izao, izy dia maneho artista madio ao anaty havoana Alamo. Mahagaga fa mahatalanjona izany. Na ny tafo aza dia mamoaka fanambarana, miaraka amin'ny tapa-tavoahangy nopotehina ary nipoitra tampoka avy amin'ny tafika nilaozan'i Oakland. Ny fara-tongotry ny elatry ny vatan-kazo tsirairay dia vita sokitra amin'ny tarehin'ny biby iray na zavatra hafa mahaliana.
Misy rindran-damina manangona terra eny an-kalamanjana, ary ireo patalarivoho biriky vita amin'ny bozaka dia miorina tsara mba handraisana ireo fomba fijery. Mahavariana tsara ny lalana eny an-dalambe any amin'ny zaridaina amin'ny teny Anglisy ary misy toerana mangina mba hipetraka sy hisaintsaina. Na dia misy trano na trano fianarana ihany aza.
Ao anaty efitrano dia feno olona liana. Ny biriky nopotehina dia nasiaka tamim-pahamendrehana ka napetraka mba tsy hamolavola rindrina mihetsiketsika. Feno ny valin-drihitra, ny sasany ny tongotra 25 avo, mampiasa hazo voajanahary sy teboka goavana recycled ary vy. Trano iray miavaka no natsangana tamin'ny fampiasana biriky taloha. Toeram-pivarotana hazo vita amin'ny tanana vita amin'ny tanana vita amin'ny vy sy trano fonenana azo antoka. Ny rindrin'ny efitrano fisakafoana dia rakotra varahina varahina ary manana fomba fijery iray momba ny racha misy rihana roa. Ny lembalemba manify, manjelanjelatra manify no mamakivaky ny ankamaroan'ny trano.
Lehibe ny lakozia ary misokatra amin'ny lapoaly vita amin'ny hazo lozika. Misy varavarankelin'ny varavarankelin'ny barika vita amin'ny jiro. Nopotehina ny volombava nalaina avy amin'ny 1960 mba hamoronana miloko marevaka.
Misy karazan-javatra mahaliana hafa ara-javakanto izay mety ho voatanisa, fa anisan'izany ny kitay sy ny kitay vita amin'ny hazo ary ny kitay hazo rehetra manodidina ny asa biriky tsara tarehy, efitrano lehibe iray misy efitrano fandrehitra feno ranon-drakitra sy rindrina avo, sambo tena izy , ary trano biriky izay miseho ho dingana.
Ny efitrano fandriam-bidy dia ahitana "tontolon'ny lapam-panjakana" naverina navoaka tao amin'ny efitrano famoahan'ny Oakland Tribune.
Misy latabatra, seza varavarankely, ary sambo, ary varavarana miafina avy amin'ny fiangonana any Angletera izay mampiavaka ny tokantrano tokan'io trano tsy mampino io.
Eny, amin'ny famolavolana, dia trano fialofana, nefa tsy misy efitra fisainana na koban-tohatra matevina. Ny Castle of Alamo dia tsara tarehy amin'ny tsara indrindra ary miorina amin'ny fampiononana rehetra ho an'ny mpanjaka na ny mpanjaka amin'izao andro maoderina izao.
Tsy ampy ora vitsy miala ny Lohasahan'i Napa, Silicon Valley, ary ny morontsiraka.
Mifandraisa amin'i Agent Melissa Fulop amin'ny fampahalalana bebe kokoa
Address: 176 Mountain Canyon Lane
Kaody positaly: 94507
Taona namboarina: 1988
Feo kodiarana: 4476
Previous ListingTrano fiompiana trondro an-tokantranoNext ListingLAKEFRONT LOG CABIN, toy ny New - 5.85 Acres
Trano fiompiana trondro an-tokantrano
LAKEFRONT LOG CABIN, toy ny New - 5.85 Acres